Maxay yihiin siyaabaha loo samaysanayo liiska goobaha sare ee backlink?
Dhamaan ganacsiyada internetka laga sameeyay waxay u baahan yihiin istaraatijiyad xoog leh si ay u muujiso bogga natiijada raadinta koowaad ama labaad. Istaraatejiyad istiraatiijiyadeed oo raadin kasta wuxuu u baahan yahay noocyo kala duwan. Iyada oo la eegayo naqshadihii ugu danbeeyay ee Google, dib u eegistaan waxay u baahan yihiin inay noqdaan tayo sare waxayna ka yimaadaan website-yada sare ee PR. Dib-u-celin kasta oo kale ayaa loo tixgeliyaa tayada hoose iyo spamka. Taasi waa sababta webmaster kasta uu u baahan yahay inuu si taxadar leh u eego tayada backlinks ee uu dhiso tayada xiriirrada soo socda ee go'aaminaya meesha aad boggaaga ku qori doonto makiinadaha raadinta ee erayada gaarka ah ee muhiimka ah.
Sidaa daraadeed su'aasha ayaa ah sida loo abuuro liisaska bogagga hore ee dib-u-celinta ee PR oo aan lumin lacag badan iyo dadaal?
Marka ay timaado raadinta boggaga mashiinnada raadinta, qaanuunka 4 V waxa uu u shaqeynayaa kan ugu fiican:
Tirada links ee tilmaamaya ilahaaga internetka. Weli wali waa saameyn weyn. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad xasuusato in tiro badan oo ka mid ah bogagga spammy, ma ku siin doonaa faa'iido.
Ilaha kala duwan ee aad u isticmaashid ujeedo dhisida ujeeddo. In ka badan, ka fiican sida ay muujineysaa Google sida websaytka inta badan soo jiidan kara domain aad u mudnaanta iyo links link.
Xawaaraha aad ku xirayso boggaaga. Google waxay ka heli kartaa shaki haddii aad dhisi doonto dib u habeyn badan oo habeenkii ah. Taa bedelkeeda, waa inaad abuurtaa tayada xiriirinta ee si joogto ah.
Qoraalka qoraalka ah ee ku yaal boggaaga. Qoraalkani wuxuu u baahan yahay inuu si fiican u qaabeeyo, qabsado oo uu ku jiro mid ka mid ah shuruudaha raadintaada la raadinayo.
Liistada goobaha sare ee PR ee dhismaha tayada tayada
Waa mashruuc bulshadeed oo sareeya kaas oo bixiya mulkiilayaasha bogagga fursado badan oo horumarin ganacsi. Mid ka mid ah hoos udhaca meerkani waa in ay leeyihiin siyaasad dhisme "raacsan". Waxaa loola jeedaa in gadaal laga soo helay Facebook uusan ku dhaafin juice isku xira domainkaaga. Si kastaba ha noqotee, backlinks ka sourceha this ka dhigi kartaa profile xiriirka ka badan oo lagu kalsoonaan karo oo awood u leh indhaha Google. YouTube
Waa shabakad PR9 oo ay leedahay Google. Waxay bixisaa dadka websaydhka leh labadaba dofollow iyo nofollow backlinks. Waad abuuri kartaa gadaal dofollow ah oo ku yaal ganacsigaaga ama sharaxaadda fiidiyowga. Dhamaan xiriirada kale ayaa noqon doona mid nofollow ah. Warka wanaagsani waa inaad channel-kaaga u rogi kartaa PR5-ga PR6-backlink. Waxay si wax ku ool ah u saameyn kartaa qiimeyntaada. Google +
Google+ waa shabakadda internetka PR8. Waa jawaab Google ah oo Facebook ah. Halkaan waxaad ka abuuri kartaa ugu yaraan hal backlinks back to the site. Waa fursad aad u fiican oo ku saabsan qiimeyntaada oo kobcinaysa maaddaama Google Google u adeegsanayso mexaantan qayb ka mid ah algorithm. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la abuuro bogga Google+ oo ay ku jiraan qoraalka ereyga oo leh ereyga raadinta ee la raadinayey ee ku yaala Profile / Area Source .